Mandamina tsara sy miara-miala amin'ny toeram-pivarotan-tsekoly mankany am-pianarana
Mamporisika tsy misy hatak'andro - avelao ny zanakao zatra mandoa alohan'ny hanombohana ny fianarana
Ny fotoana voalohany any am-pianarana dia ataovy izay hahazoanao fitsaharana ampy
Amin'ny vanim-potoana enina, ny fiandohanan'ny fiainana dia manomboka: ny ankizy dia naheno ireo fehezan-teny na teny mitovy amin'izany tamin'ny andro voalohany rehefa nanakaiky ny fisoratana anarana.
Avy any amin'ny kolejy amin'ny mpianatra - mahomby ny tetezamita
Nandritra ny taona vitsivitsy, dia niova matetika ny fandaharam-pianarana amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ary manolo-tena ho azy ireo ny mpampianatra amin'izao fotoana izao mba hanamora ny ankizy hanomboka fampianarana amin'ny alàlan'ny fampidirana singa amam-pitaovana maro ao an-dakilasy ary hampihena ny tahotra. Niara-niasa tamin'ny toerana maro koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny sekolin-jaza sy ny sekoly ambaratonga fototra.
Na izany aza, maro ireo ankizy ao amin'ny akanin-jaza no mahatsiaro maivana noho ny fifaliana rehefa mieritreritra ny anjara asany vaovao izy ireo amin'ny maha-mpianatra. Raha ny tena izy, ity dingana vaovao amin'ny fiainana ity dia mitondra fiovana lehibe goavana sy, indrindra indrindra, adidy.
Miaraka amin'ireo mpampianatra, amin'ny maha ray aman-dreny anao, dia tokony hiezaka ianao mba hahatonga ny fifindrana eo amin'ny zaza kambana sy ny sekoly ho malefaka araka izay tratra ary hanomana tsara ny zanakao amin'ireo fanamby vaovao.
Ny fahasamihafana goavana eo amin'ny fampiroboroboana ny sekolin'ny ankizy sy ny fianarana any an-tsekoly dia ny fahitana ankizy iray any an-tsekoly tampoka dia manana andraikitra bebe kokoa. Vao avy nitsidika sy nihomehy ary nihanihany nandritra ny andro manontolo izy ary tsy maintsy tonga ao an-telefaona mandritra ny minitra vitsy monja ny 45, mitazona ny bokiny foana, manao asa an-trano ary manoratra taratasy madio.
Tara-pihetseham-po ho an'ny vao-taona maro izany. Noho izany, ilaina ny fanabeazana ankizy efa mialoha ny fisoratana anarana amin'ny fidiram-bola. Tsy midika akory izany fa ny ankizy madinika dia mila manao asa soratra na karajia isan'andro. Misy fomba hafa.
Ny fiandohan'ny sekoly dia manomboka ny fianarana any an-tsekoly
Ohatra, raha te-hanatrika ny klioban'ny gymnastique na ny sekolin'ny mozika ny zanakao, dia tokony handray anjara amin'ny lesona tsy misy ifandraisany izy ireo. Avy eo dia mety hanapa-kevitra izy fa raha misy fandraisana anjara hafa azo ekena na tsia. Saingy: Raha vantany vao nanapa-kevitra ny zanakao dia tokony hijanona izany - indrindra raha efa nandoa ny saram-pandraharahana fanao isan-taona.
Na dia eo amin'ny fiainana andavanandro aza dia misy toe-javatra ao amin'ny fianakaviana rehetra izay ahafahan'ny ankizy mialoka amin'ny andraikitra sasantsasany. Ampio, ohatra, ny zanakao vavy na ny zanakao hanao ny fako, hiditra any amin'ny bakak'ondry, na hametraka ny latabatra tsy tapaka. Io dia hamono ireo vorona maromaro amin'ny vato iray, satria ny zanakao dia tsy mamolavola adidy fotsiny fa mahatsapa ihany koa fa raisina ho matotra. Ankoatra izany, matanjaka ny fatokisany ny tenany.
Ankoatra izany, dia ampirisiho hatrany ny zanakao hisaina, hijery ary hihaino. Inona no nolazain'ny mpanabe momba ny dia? Inona no akanjo ilaina amin'ny fampisehoana amin'ny lanonana fahavaratra? Inona avy ny safidy azon'ny zanakao amin'ny famahana ny fifandirana eo amin'ireo fahafinaretana roa tsara indrindra?
Raha manao izany ianao dia mampiroborobo ny fahaizanao mifantoka sy mieritreritra amin'ny làlana mifantoka amin'ny vahaolana. Ireo tekinika roa ireo dia ilaina maika ataon'ny mpianatra, satria manamora ny fandalinana ny fianarana.
Zava-dehibe koa: Avelao ny zanakao hiezaka mafy araka izay tratra ary hampiroborobo ny fahaleovan-tenany. Ohatra, rehefa tonga any an-tsekoly dia tokony ho afaka hibanjina irery, hikarakara ny tenany, ary hikarakara ny fananany manokana.
Indrindra fa ny herinandro voalohany amin'ny sekolim-pahaizana dia tena mandreraka ny ankizy. Tsy vitan'ny hoe mila mianatra fotsiny ianao, tsy maintsy mahita ny lalanao amin'ny trano tsy fantatra, manamboatra ny làlana mankany am-pianarana ary mandray ny toeranao eo anivon'ny fiarahamonina. Ny devoaratra dia amin'ny tolakandro.
Ny fiandohan'ny sekoly dia tsy maintsy miaraka amin'ny ray aman-dreny
Mandritra izao fotoana izao, toy ny reny na ray, tokony ho azonao antoka fa matory ampy tsara ny zanakao ary manam-potoana hisitrahana mandritra ny andro. V
Miezaha hitazona ny isan'ireo tolakandro amin'ny tolakandro mba ho afaka hihaona amin'ny namana na hipetraka ao amin'ny efitranony ny zanakao lahy na vavy.
Aza manery ny zanakao raha sarotra ny mahafeno fepetra amin'ny fanabeazana. Mpianatra maro no nifaninana nifampiarahaba noho ny fiderana avy amin'ny mpampianatra ary nanampy trotraka ny adin-tsainy. Ampirisiho ny zanakao hanampy amin'ny devoaranao, fa ekeo izy ireo raha mandà ny fanampianao izy ireo.
Zava-dehibe koa: raha manao fahadisoana ny zanakao dia aza manitsy azy ireo. Raha tsy izany, ny mpampianatra dia hanimba ny haavon'ny zanakao, ary ny vokatra dia ho sahiran-tsaina amin'ny fitsapana voalohany.
Raha hitanao fa be loatra ny zanakao dia tadiavo ilay resaka amin'ny mpampianatra. Ireo mpianatra voalohany dia tsy tokony handany mihoatra ny 30 ka hatramin'ny 40 minitra amin'ny devoarany.
fandokoana Nessie vom Loch Ness
Novaina avy tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Nahoana isika no mangetaheta an'io toerana io? ankizy fanontaniana